Mitsubishi Colt Plus 2008 (#653603) ကို South Okkalapa မြ... | CarsDB
Lot Number: #653603
**** Cars DB တွင်ကြော်ငြာထားသောကားဟုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ Good Condition – Mitsubishi Colt Plus RX ​လေးတစ်​စီး ​ရောင်းချင်​လို့ပါ။
Engine Power ~ 1500cc
No. ~ 7H/****(YGN)
Model ~ 2008
Transmission ~ Semiauto +-
Original Alloy, Fog light and all new tyres.
Price ~ 165 lakh
Contact ~ 095090985, 09795252558
Location ~ South Okkalarpa Tsp.
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Zwe Thu မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Mitsubishi Colt Plus 2008 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။